डेटिङसम्बन्धी यहोवाका साक्षीहरूको नियम छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गाबेरे एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काचिन काजाक किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी गालिसियन गून ग्रीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चेक चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डेनिश ताङ्काराना तारास्कान ताहिटी तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्सोंगा थाई नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बुल्गेरियन बोउलो भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) मले मल्यालम माम मालागासी माल्टिज म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सिबेम्बा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
बाइबलमा थुप्रै आज्ञा र सिद्धान्त पाइन्छ। हामी यहोवाका साक्षीहरू यस अनुरूप जीवन बिताउँछौं। यी सिद्धान्त र आज्ञाहरू हामीले बनाएका होइनौं। यी सिद्धान्तहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने र हाम्रै हित हुने निर्णय गर्न मदत गर्छ। (यशैया ४८:१७, १८) यी सिद्धान्त र आज्ञाहरू डेटिङसित कसरी सम्बन्धित छन्‌, विचार गरौं। *
विवाह स्थायी बन्धन हो। (मत्ती १९:६) यहोवाका साक्षीहरू विवाह गर्ने उद्देश्यले मात्र डेटिङ गर्छन्‌। त्यसैले हामी डेटिङलाई गम्भीरतासाथ लिन्छौं।
डेटिङ विवाह गर्ने उमेर भइसकेकाहरूका लागि मात्र हो। तिनीहरू “बैंस पार गरिसकेको” अर्थात्‌ यौनइच्छा तीव्र हुने समय पार गरिसकेको हुनुपर्छ।—१ कोरिन्थी ७:३६.
डेटिङ गर्नेहरू अरूसित विवाह बन्धनमा बाँधिएको हुनु हुँदैन। कानुनी रूपमा सम्बन्धविच्छेद भएको छ भन्दैमा फेरि विवाह गर्ने छुट पाइँदैन। किनभने बाइबलमा बताइएअनुसार सम्बन्धविच्छेद गर्ने एउटै मात्र आधार अवैध यौनसम्बन्ध हो।—मत्ती १९:९.
कुनै यहोवाको साक्षी विवाह गर्न चाहन्छन्‌ भने तिनले यहोवाको उपासकसित मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने आज्ञा बाइबलमा दिइएको छ। (१ कोरिन्थी ७:३९) त्यसकारण कसैले हाम्रो विश्वासको आदर गर्छ भन्दैमा उक्त व्यक्तिसित विवाह गर्न मिल्दैन। हामीले विवाह गर्ने व्यक्ति बप्तिस्मा गरेको यहोवाको साक्षी नै हुनुपर्छ। (२ कोरिन्थी ६:१४) परमेश्वरले सुरुदेखि नै आफ्ना सेवकहरूलाई उहाँको उपासना गर्नेहरूसित मात्र विवाह गर्नू भन्ने आज्ञा दिंदै आउनुभएको छ। (उत्पत्ति २४:३; मलाकी २:११) बाइबलको यो आज्ञा अनुरूप चल्दा वैवाहिक जीवन स्थायी हुन्छ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले मानिलिएका छन्‌। *
छोराछोरीले बुबाआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। (हितोपदेश १:८; कलस्सी ३:२०) यस्तो आज्ञामा डेटिङसम्बन्धी बुबाआमाले दिएको सल्लाह पनि समावेश छ। जस्तै: छोराछोरीले कुन उमेरदेखि डेटिङ गर्न सक्छन्‌, डेटिङ गर्दा के गर्न मिल्छ वा के गर्न मिल्दैन।
यहोवाका साक्षीहरूले डेटिङ गर्ने कि नगर्ने र गर्ने हो भने कोसित गर्ने भनेर आफै निर्णय गर्छन्‌। यो कुरा यस सिद्धान्तसित मेल खान्छ, “हरेकले आफ्नो भारी आफै बोक्नेछ।” (गलाती ६:५) तैपनि थुप्रैले डेटिङ गर्नुअघि परिपक्व ख्रीष्टियनसित सल्लाह माग्ने गरेका छन्‌।—हितोपदेश १:५.
बाइबलले अवैध यौनसम्बन्धबाट अलग रहनू भन्ने आज्ञा दिएको छ। यस आज्ञामा अविवाहित व्यक्तिबीच गरिने यौनजन्य क्रियाकलापहरू पनि समावेश छन्‌। जस्तै: यौन अङ्‌ग सुमसुम्याउनु, मुख मैथुन वा मलद्वार मैथुन। (१ कोरिन्थी ६:९-११) डेटिङ गर्ने प्रायजसो मानिसले यस्ता क्रियाकलापलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्‌, जुन वास्तवमा गम्भीर पाप हो। यसबाहेक यौनइच्छा जगाउने अन्य क्रियाकलाप पनि “अशुद्धपन” हो, जुन कुरा परमेश्वर घृणा गर्नुहुन्छ। (गलाती ५:१९-२१) साथै छाडा कुराकानी पनि गर्नु हुँदैन किनभने बाइबलमा “अश्‍लील बोली” नबोल्नू भनी स्पष्टै बताइएको छ।—कलस्सी ३:८.
हाम्रो हृदय छली छ। (यर्मिया १७:९) यसले मानिसलाई जानाजानी गलत काम गर्न उक्साउँछ। त्यसैले डेटिङ गर्दा सुनसान ठाउँमा जानु हुँदैन। बरु आफूसँगै कोही साथी लान सकिन्छ अथवा साथीभाइको जमघटमा रहेर डेटिङ गर्न सकिन्छ। (हितोपदेश २८:२६) जोडी खोजिरहेकाहरूले अनलाइन डेटिङ साइटमा जाँदा आइपर्ने खतराबारे बुझ्नुपर्छ। विशेषगरि, अपरिचित व्यक्तिसित हिमचिम बढाउँदा हुने खतराबारे राम्ररी बुझ्नुपर्छ।—भजन २६:४.
^ अनु.2कुनै-कुनै समाजमा डेटिङ गर्ने चलन छ भने कुनै-कुनैमा छैन। बाइबलमा विवाह गर्नुअघि डेटिङ गर्नै पर्छ भनी बताइएको छैन।
^ अनु.6उदाहरणको लागि, विवाहसम्बन्धी एउटा पत्रिकामा यस्तो लेखिएको छ, “विवाहित जोडीको धार्मिक आस्था एउटै छ भने यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध स्थायी र सफल हुन्छ भनेर वैवाहिक जीवनसम्बन्धी गरिएको तीनवटा फरक-फरक अध्ययनले देखाएको छ।” उक्त पत्रिकाअनुसार २५ देखि ५० वर्षभन्दा लामो समयसम्म टिकेको विवाह स्थायी विवाह हो।—म्यारिज एन्ड फ्यामिली रिभ्यु, खण्ड ३८, अङ्‌क १, पृष्ठ ८८ (२००५).
डेटिङ भनेको एकअर्कालाई रोमान्टिक चासो देखाउनु अनि कुनै पनि तरिकाले नजिकिनु हो। समूहमा वा दुई जना मात्रै, खुल्ला वा गुप्तमा, भेटेरै, फोनमार्फत वा टेक्सट मेसेजमार्फत डेटिङ गरिन्छ। यहोवाका साक्षीहरू डेटिङलाई मनोरञ्जनको रूपमा लिंदैनन्‌। बरु विवाहअघि चालिने गम्भीर कदमको रूपमा लिन्छन्‌।
यी चार प्रश्नहरू विचार गर्नुहोस् र आफू डेटिङ गर्न सक्ने भइसकेको छु कि छैन पक्का गर्नुहोस्।